“Manchester United waa koox xoogan” – Bartomeu oo fariin digniin ah u diray ciyaartoyda Barcelona – Gool FM
“Manchester United waa koox xoogan” – Bartomeu oo fariin digniin ah u diray ciyaartoyda Barcelona
(Spain) 07 Abriil 2019. Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa kaga digay ciyaartoydiisa inay sahal sadaan kulanka soo aadan ay Manchester United kula ciyaari doonaan wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.
Hadalka Josep Maria Bartomeu ayaa wuxuu imaanayaa kadib guushii 2-0 ahayd ay xalay kaga gaareen kooxda Atletico Madrid garoonka Cump Nou, kulan ka tirsanaa kulamada 31-aad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Barcelona ayaa marti ku noqon doonto garoonka Old Trafford habeenka Arbacada ee soo aadan, si ay u wada ciyaaraan kooxda Red Devils kulanka lugta hore wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League.
Yeelkadeeda, madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa sheegay in cashar ay ka barteen kulankii naxdinta lahaa ee Roma, wuxuuna carabka ku adkeeyay in Man United ay tahay koox xoog badan.
“Wax badan ayaan ka baranay habeenkaas kulankii ka dhacay magaalada Roma, ka haristeena tartanka waxay ku ahayd dharbaaxa xoogan kooxda Barcelona oo dhan, shaqaalaha, ciyaartoyda, farsamoyaqaanada iyo maamulayaasha”.
“Ma jirto koox sahlan, meel kasta, mana u baahnid inaad ku fikirto inaad tahay kooxda ugu cad cad ee u gudbi karta wareeg xiga, waxaan si layaab leh u harnay dhowr jeer, waa inaan ka taxadirnaa tartanka Champions League”.
“Waxaan diyaar u nahay inaan aadno Manchester, taasoo ah koox aad u xoogan”.
“Juventus way garaaci kartaa kooxda Ajax xitaa la’aanta Cristiano Ronaldo” - Andrea Pirlo